Fri, Jul 10, 2020 at 1:32am
काठमाडौं, ७ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवारका लागी १ अमेरिकन डलरको खरिददर ११९ रुपियाँ ६८ पैसा तथा बिक्रिदर १२० रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको छ । त्यस्तै युरोपियन युरो १ को खरिददर १२८ रुपियाँ ७० पैसा तथा बिक्रिदर १२९ रुपियाँ ३४ पैसा रहेको छ । त्यस्तै आजका लागी १ मलेसियन रिंगिटको खरिददर २७ रुपियाँ ११ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपियाँ २४ पैसा..
काठमाडाैं, ७ चैत। व्यापारीको कालोबजार नियन्त्रण गर्न सरकारले खाद्य पसलहरू सञ्चालन गर्नेभएको छ । कोरोना भाइरसको त्रास देखाएर खाद्य सामग्रीको भण्डारण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र महँगोमा बेच्ने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले उपत्यकाका पाँच स्थानमा खाद्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिएका छन् । सरकारद्वारा बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा..
काठमाडाैं, ६ चैत । बिहिबार पुनः नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बुधबार तोलामा १ हजार रुपैयाँले बढेको छापावाल सुनको मूल्य बिहीबार भने १ हजार ५ सय रुपैयाँले घटेको हो । विहिबार छापावाल सुनको मूल्य ७५ हजार रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसअघि बुधबार सुन प्रतितोला रु ७६ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो । यस्तै..
काठमाडाैं, ५ चैत । बुधबार नेपाली बजारमा सुनकाे भाउ पुन: बढेकाे छ । मंगलबार ताेलामा ३ हजार रूपैयाँले घटेकाे छापावाल सुनकाे मूल्य आज १ हजार रूपैयाँले बढेकाे हाे । १ हजार रूपैयाँले बढेसँगै छापावाल सुन बुधबार तोलाको ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । मङ्गलबार एकैदिन तोलामा दुई हजार रुपैयाँ घटेर सुन तोलाको ७५ हजार पाँच..
काठमाडाैं, ४ चैत । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य ताेलामा २ हजार रूपैयाँले घटेकाे छ । आइतबार १५ सयले घटेर प्रतितोला ७७ हजार रूपैयाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार ५ सय रुपैयाँले बढेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन ७५ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ । साथै तेजावी सुनकाे मूल्य पनि घटेर मैगलबार ताेलाकाे ७५ हजार २ सय..
काठमाडौं,४ चैत। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले मध्य राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फको मूल्य घटाएको हो । निगमले डिजेल पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँले मूल्य घटाएको छ । यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको मूल्य ४ रुपैयाँ ५० पैसाले घट्दा एलपीजी ग्यास र..
काठमाडौं, ३ चैत । लगातार घटेकाे सुनकाे भाउ साेमबार पुन: बढेकाे छ । आइतबार १५ सयले घटेर प्रतितोला ७७ हजारमा कारोबार भएको सुन आज ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन ७७ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ । सुन एकैदिन ३ हजारले घट्दै सुन शुक्रबार ७८ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो । महासंघका अनुसार आज..
काठमाडाैं, २ चैत । नाेटकाे काराेबार गर्दा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । यसअघिका विभिन्न अध्ययन र घटनाक्रमले पनि कोरोनाको भाइरसको संक्रमण नोटमा समेत धेरै हुने सम्भावना औल्याएको थियो । यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर सकेसम्म नगद रहित कारोबार गर्न वा गरेपनि सफा गरेर सिक्काको कारोबार गर्न यस अघि नै विभिन्न देशहरुले आग्रह गर्दै आएका छन्..
काठमाडौं, २ चैत । काराेबारकाे पहिलाे दिन आइतबार पनि नेपाली बजारमा सुनकाे भाउ घटेकाे छ । शुक्रबार ३ हजारले घटेकाे सुनकाे भाउ आइतबार पनि १ हजार ५ सय रूपैयाँले घटेकाे हाे । शुक्रबार प्रतितोला ७८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आइतबार तोलामा १ हजार ५ सय रुपैयाँले घटेर ७७ हजार कायमा भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।त्यस्तै,..
काठमाडौं, ३० फागुन । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनकाे भाउ ह्वात्तै घटेकाे छ । सुनको भाउ शुक्रबार एकैदिन तोलामा तीन हजार रुपैयाँले घटेको हाे। बिहीबार प्रतिताेला ८१ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भउकाे सुनको भाउ शुक्रबार तोलाको ७८ हजार पाँच सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । सुन बिहीबार तोलामा आठ सय रुपैयाँले घटेकाे थियाे । यस्तै चाँदी आज तोलामा ४० रुपैयाँले घटेकाे छ..
काठमाडौं, २९ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा पछिल्लो साता करिब २० प्रतिशतले कमी आउँदा पनि नेपाली उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सरकारले उच्च कर लगाएपछि नेपाल आयल निगमले नाफा राखेर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दा त्यसको भार उपभोक्तालाई परेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् २०१९ को डिसेम्बर ३० मा प्रतिब्यारेल ६३.०५ डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य बुधबार करिब आधा..
काठमाडौं, २८ फागुन । लगातार बढेकाे सुनकाे भाउ बुधबार सामान्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबारका लागि छापावाला सुन तोलाको ८२ हजार ३ सय कायम गरेको छ । मंगलबार तोलाको ८२ हजार ७ सयमा कारोबार भएको थियो । जुन मूल्य हालसम्मकै उच्च थियो । हिजोको तुलनामा आज सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेको हो । आइतबार तोलाको ८२ हजार ५..
काठमाडाैं, २६ फागुन । विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले प्रभाव पार्न थालेसँगै सुन र डलरको भाउ थप आकाशिन थालेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पारेपछि सुरक्षित लगानीको रुपमा सुन र डलरको माग बढिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख बमबहादुर मिश्रले बताए। विश्वमै शेयर बजार लगातार ओरालो झर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरुले सुरक्षित लगानीको रुपमा सुन र डलरमा लगानी गर्न थालेकाले केहि समयदेखि मूल्य आकाशिदै..
काठमाडौं, २३ फागुन । कोरोना भाइरसका कारण सुनको मूल्य निन्तर बढेकाे छ ।बिहीबार २२ सय रूपैयाँले बढेकाे सुनकाे मूल्य शुक्रबार पनि तोलामा १८ सय रूपैयँले बढेकाे छ । आज सुनकाे मूल्य ८२ हजार ५ सय रूपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । छापावाल सुन हिजो बिहीबार तोलाको ८० हजार ७ सयमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज तेजाबी सुनको भाउ..
काठमाडौं, २१ फागुन । कोरोना भानइरसकाे संक्रमणले प्रभावित बनेकाे विश्व अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष असर सुनमा देखिँदा यसको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आएकाे छ । बुधबार नेपाली बजारमा छापावाल सुन एकैदिन प्रतितोला २२ सय रुपैयाँले बढेर ८० हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएकाे छ । मंगलबार भने छापावाला सुन ७८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार तेजाबी सुन पनि २२ सय..
काठमाडौं, २० फागुन । साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुन प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले बढेको हो । सोमबार ७८ हजारमा कारोबार भएको सुनको मूल्य तीन सयले बढेर आज ७८ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, तेजाबी सुनको मूल्य ७८ हजार कायम भएको छ । आजका लागि चाँदीको मूल्य..
काठमाडौं, १८ फागुन । आइतबार नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ । शुक्रबार घटेको सुनको मूल्यमा आइतबार पनि कमी आएको हो । शुक्रबारको तुलनामा आइतबारको मूल्य प्रतितोला १२ सय रुपैयाँले कम छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ७८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको हो । शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७९ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । छापावाल सुनको मूल्य घटेसँगै..
काठमाडाैं,१७ फागुन। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मुल्यमा असर परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल क्रुड आयलको मुल्य ३० प्रतिशतले घटेको समाचार अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेका छन् । हाल कच्चा तेलको मुल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५० डलर प्रति व्यारेल रहेकोमा यो अझ ४५ डलर प्रति व्यारेलसम्म झर्न सक्ने विश्लेषण आउन थालेको छ । हालको यो मुल्य सन्..
काठमाडौं, १५ फागुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप ५ रुपैंया पूर्वाधार कर लगाइए पनि मूल्य भने नबढ्ने भएको छ । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमा थपिएको कर निगमले लिँदै आएको नाफाबाट समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो । कर बढेकै कारण उपभोक्ताले थप मूल्य व्यहोर्नु नपर्ने नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए । ‘हामी अहिले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा छौं, त्यसैले..
काठमाडौँ, ५ फागुन नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ घटाएको छ । साेमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी तीन वटै पदार्थमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले भाउ घटाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अब काठमाण्डाैमा पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय आठ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य ९७ रुपैयाँ कायम भएको छ । भारतमा तेलको मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि समायोजन भएको निगमले..
काठमाडौं, ४ फागुन नेपालीको भान्सा थप महंगिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा मुद्रास्फीति ६.८२ प्रतिशत पुगेको छ। औषत मुद्रास्फीति पनि बढेर ६.४१ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मुद्रास्फीति ४.५८ प्रतिशत थियो। समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १० दशमलव २१ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.२५ प्रतिशत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार..
काठमाडौं, ४ फागुन । नेपाली बजारमा आइतबार सुनकाे मूल्य बढेकाे छ । सुनको भाउ आइतबार तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको हाे । सुनको भाउ आइतबार ७६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसअघि सुन गएको पुस २३ गते नयाँ रेकर्ड बनाउँदै तोलाको साढे ७६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसयता घटबढ हुँदै गएको सुनको भाउ माघ १९..
विराटनगर, फागुन २ कृषि र औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले विराटनगरमा शुक्रबारबाट ‘विराट एक्स्पो २०७६’ सुरु भएको छ । प्रदर्शनीको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्रयाक’मा अगाडि बढेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयन सफलतातर्फ उन्मुख भएको र छोटो समयमै वित्तीय संघीयताका विषयमा देखिएका अस्पष्टता ‘क्लियर’ भइ कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गरे..
काठमाडाैं, १ फागुन । बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले बढेको हाे । बुधबार प्रतितोला ७५ हजार ७ सयमा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज ७६ हजार पुगेको छ । यस्तै आज तेजावी सुनकाे मूल्य पनि ३ सय रूपैयाँले नै बढेर ७५ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपालसुनचाँदी व्यवसायी महाँसघले जनाएको छ । चाँदीको मुल्य..
काठमाडाैं १ पुष। मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु अनुकूल अवस्थामा भए पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसकेको देखिएको छ। पूर्ण बहुमतको बलियो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा गरेको खर्चको तथ्यांकले विगतमा भन्दा फरक ढंगले काम गर्न नसकेको देखाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटको मध्यावधि (असार–पुस) समीक्षा गर्दै बुधबार सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले स्थिर र बलियो सरकार आएमात्र आर्थिक..
काठमाडौं, २९ माघ । बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । आज सुन प्रतितोला २ सय रुपैयाँले घटेको हो । मंगलबार तोलामा ७५ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार तोलामा ७५ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै आज तेजावी सुन तोलामा ७५ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम..
काठमाडौं, २४ माघ । युरोपेली देश स्विटजरल्याण्ड विश्वको सबैभन्दा महँगो देश बनेको छ । ८६ लाख आवादी रहेको सुन्दर देशहरुमध्यको एक स्विटजरल्याण्ड सबैभन्दा महँगा देशहरुको सूचीमा पहिलो स्थानमा परेको हो । त्यसैगरी करिब ५४ लाख आवादी रहेको देश नर्वे उक्त सूचीमा दोस्रो स्थानमा र ३ लाख ६३ हजार जनसंख्या रहेको आइसल्याण्ड तेस्रो स्थानमा परेको छ । महँगो देशको सूचीमा नेपाल १ सय..
काठमाडाैं, २२ माघ । नेपाली बजारमा सुनकाे मुल्य आज प्रतिताेला ८ सय रूपैयाँले घटेकाे छ । बुधबार सुन तोलाको ७५ हजार दुई सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । मङ्गलबार तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज तोलामा ८ सय रुपैयाँ घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शेयर कारोबारमा सुधार आएपछि सुनको भाउ घट्न थालेको महासङ्घअन्तर्गतको भाउ निर्धारण समितिले जनाएको छ..
Results 1681: You are at page3of 57